UDangarembga uklonyeliswe indondo ngokubhikishela ingcindezelo e-Zimbabwe | Scrolla Izindaba
UDangarembga uklonyeliswe indondo ngokubhikishela ingcindezelo e-Zimbabwe
Umbhali wamanoveli wase-Zimbabwe uTsitsi Dangarembga uhlonishwe ngendondo ye-PEN Freedom of Expression yangowezi-2021 ngokuqhubeka kwakhe nokulwa nokugqunywa ejele kwentatheli uHopewell Chinoono ngokungekho emthethweni.
Lo mklomelo waminyaka yonke “uhlonipha ababhali abashushiswe ngomsebenzi wabo futhi abaqhubeka nokusebenza yize kunemiphumela engemihle”.
UDangarembga ubambe iqhaza emibhikishweni eyagqugquzela inhlangano yezokuxhumana ngaphansi komfanekiso othi #ZimbabweanLivesMatter.
Esebenzisa inkundla yakhe yokuxhumana nomphakathi, ucele ukuthi kudedelwe umuntu wakubo uChino’ono, owaboshwa kabili ngonyaka wezi-2020 ngokuthumela ama-tweets alwa nohulumeni.
Intatheli esiwine izindondo zokuba ngumphenyi, yaphinde yaboshwa ngesonto eledlule kanti njengamanje isagcinwe esitokisini.
NgoMsombuluko uthembise ukuthi “uzolwela” inkululeko yokukhuluma esitatimendeni esibuhlungu esibhalwe esitokisini sakhe.
Indima kaDangarembga emibhikishweni yaholela ekuboshweni kwakhe yiziphathimandla zase-Zimbabwe, kodwa wabuye wadedelwa ngebheyili.
Ukuboshwa kwakhe kwahlangatshezwa ngejubane ngumphakathi wezincwadi zomhlaba wonke futhi kusizile ukukhanyisa ngokuhlaselwa kwenkululeko yokukhuluma okuqhubekayo ezandleni zikahulumeni wase-Zimbabwe.
UMengameli uEmmerson Mnangagwa usalokhu eqhubeka nokungakubekezeleli ukuphikisana selokhu angena esikhundleni ngowezi-2018.
Inoveli kaDangarembga i-The Mournable Body, eyaqokwa ohlwini lwe-2020 Booker Prize, ikhombisa isimo sezepolitiki esicindezelayo e-Zimbabwe.